အပေါ်ယံ ပြတ်ရှရာ၊ ဒဏ်ရာများအတွက် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း - Hello Sayarwon
နေ့စဉ်ဘဝတွင် လူများသည် အပေါ်ယံ ပြတ်ရှရာ၊ ဒဏ်ရာ များ ရနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင် ထိုအသေးစား ဒဏ်ရာ များကို သင့်တော်စွာ ကုသရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖော်ပြသွားပါမည်။
သန့်စင်သော ရေ၊ ဆပ်ပြာဖြင့် လက်ကို သေချာ ဆေးကြောပါ။ ၎င်းသည် ရှေးဦးသူနာပြုလုပ်ရာတွင် ရောဂါပိုး များမကူးစက်အောင် ကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ တတ်နိုင်ပါက နှစ်ဆကာကွယ်နိုင်အောင် တစ်ခါသုံးလက်အိတ်ပါ ဝတ်ဆင် ပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် အပေါ်ယံ ပြတ်ရှရာ၊ ဒဏ်ရာများသည် သူ့ အလိုလို သွေးတိတ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း မတိတ်ပါက အောက်ပါအဆင့်များကို ဆောင်ရွက်ပါ။
သန့်စင်သော အဝတ်၊ တစ်ရှူး၊ ပိတ်စအပါးဖြင့် အနာ ကို အုပ်ပါ။
သွေးမတိတ်မချင်း အုပ်ထားသော နေရာကို ဖိထားပါ။
သွေးထွက်လာပြီး အဝတ်စိုလာပါက ဖယ်ရှားပြီး အသစ်မကပ်ဘဲ နောက်ထပ် အဝတ်အလွှာများကို အရင်အလွှာပေါ်တွင် ထပ်အုပ်ပါ။ ပြတ်ရှရာ သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာကို ပို၍ ပြင်းပြင်း ဖိပေးပါ။
ဒဏ်ရာသည် ခြေ၊လက်ပေါ်တွင် ရှိပါက သွေးထွက်မှု နည်းအောင် နှလုံးပြင်ညီထက် မြင့်အောင် ထားပါ။
ပြတ်ရှရာသည် ဖိအားပေးထားသော်လည်း သွေးထွက် ခြင်း မရပ်ပါက ကျပ်စည်းပေးပါ။
သွေးထွက်ခြင်း ရပ်သွားပါက လက်ကို ထပ်ဆေးပြီး ပြတ်ရာကို ဆေးကြောရန်ပြင်ဆင်ပါ။
ဤအဆင့်သည် ရောဂါပိုးကူးစက်ခြင်းနှင့် မေးခိုင်ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့ချပေးသည်။
သန့်စင်သောရေဖြင့် ဒဏ်ရာကို ညင်သာစွာ ဆေး ကြောပါ။ ခြောက်သွေ့အောင် သန့်ရှင်းသော၊ နူးညံ့ သော အဝတ် သို့မဟုတ် တစ်ရှူးဖြင့် ညင်သာစွာ သုတ်ပါ။
ဒဏ်ရာ ဝန်းကျင်ရှိနေရာကို ပိုးမွှားသေစေသော ဆပ်ပြာဖြင့် ဆေးကြောပါ။ ဆပ်ပြာကို ဒဏ်ရာထဲ မဝင်ပါစေနှင့်။ ဆပ်ပြာသည် ဒဏ်ရာကို ရောင်ရမ်း စေနိုင်သည်။ Hydrogen peroxide သည် အရေပြား ပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် အသုံးပြုခြင်း ကို ရှောင်ပါ။
ဒဏ်ရာထဲတွင် ခန္ဓါကိုယ်ပြင်ပ ပစ္စည်းများရှိနေပါက ပိုးသတ်ထားသော ဇာဂနာကိုသုံးကာ ဖယ်ရှားပါ။ ဖယ်၍ မရပါက ထပ်မကြိုးစားပါနှင့်။ ဆရာဝန်ဆီ သွားပြပါ။ ဒဏ်ရာကို အလွန်အမင်းထိခြင်းသည် ပိုပြီး ဆိုးရွားစေနိုင်သည်။
အပေါ်ယံ ပြတ်ရှရာ သို့မဟုတ် ဒဏ်ရာကို နောက်ထပ် မထိခိုက် အောင် ကာကွယ်ပါ။
အနာကို ပဋိဇီဝလိမ်းဆေး ပါးပါးလိမ်းပေးပြီး စိုစွတ် အောင်ထားပါ။ ၎င်းသည် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုများကို ကာကွယ်ပေးပြီး သဘာဝအတိုင်း အနာကျက်ခြင်းကို တွန်းအားပေးသည်။ သို့သော်လည်း အဖုအပိမ့်များ ထွက်ခြင်း၊ မသက်သာခြင်း ဖြစ်ပါက ထိုပစ္စည်းများကို ဆက်မသုံးပါနှင့်။
ဒဏ်ရာကို ပိုးသတ်ထားသော ပတ်တီးဖြင့် စည်းပါ။ ၎င်းသည် ဒဏ်ရာကို သန့်စင်စေပြီး ဘတ်တီးရီးယား များ ထကြွခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ သို့သော်လည်း ကုတ်ခြစ်ရာကဲ့သို့ အသေးစား ဒဏ်ရာများကို မဖုံးအုပ် ဘဲထားခြင်းသည် ပိုကောင်းသည်။
ပတ်တီးကို နေ့စဉ်လဲပေးပြီး အနာကို သန့်ရှင်းအောင် ထားပါ။ ရေ မထိအောင်ထားပါ။ ရေသည် အနာကို စိုစွတ်စေပြီး အနာကျက်ခြင်းကို ဟန့်တားသည်။
ပြတ်ရှရာများသည် ပြင်းထန်ပြီး နက်ပါက ဆေးခန်းသို့ သွားပြီး ချုပ်ပါ။
ရောဂါပိုးကူးစက်မှု၏ လက္ခဏာများကို စောင့်ကြည့်ပါ။ ဒဏ်ရာသည် နီရဲခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ အပြင်းအထန် နာခြင်း ဖြစ်လာပါက ဆေးပညာအကူအညီ ရယူပါ။
ဆိုးကျိုးများကို ကာကွယ်ရန် မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပါ။
အောက်ပါတို့ဖြစ်ပါက ကျန်းမာရေး အကူအညီရယူပါ။
ဒဏ်ရာသည် နက်ပြီး ပွင့်ဟနေပါက
ဒဏ်ရာသည် ရင်ဘတ်၊ ဝမ်းဗိုက် သို့မဟုတ် မျက်နှာ တွင်ရှိပါက
ဒဏ်ရာထဲရှိ ပြင်ပပစ္စည်းကို ဖယ်ထုတ်၍ မရပါက
၁၀ မိနစ်လောက် ဖိထားပြီး သွေးထွက် မရပ်ပါက
ဒဏ်ရာတွင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၏ လက္ခဏာများ၊ ထုံထိုင်ခြင်းများ ပြပါက၊ သို့မဟုတ် အဖျားဝင်လာပါကလူနာတွင် ခန္ဓါကိုယ်အတွင်းပိုင်း ဒဏ်ရာ ရှိနိုင်သည်။
Bleeding Cuts or Wounds. http://www.webmd.com/first-aid/bleeding-cuts-woundsAccessed March 01, 2017
Cuts and Scrapes: First Aid. http://www.mayoclinic.org/first-aid/first-aid-cuts/basics/art-20056711Accessed March 01, 2017